Jimco, Jun 19, 2020-Dowladda Tanzania oo gashay heegan xooggan , kadib hanjabaad uga timid koox jihaaddi ah oo ka dhisan Mozambique – LaacibOnline
Jimco, Jun 19, 2020-Dowladda Tanzania oo gashay heegan xooggan , kadib hanjabaad uga timid koox jihaaddi ah oo ka dhisan Mozambique
Dowladda Tanzania oo gashay heegan xooggan , kadib hanjabaad uga timid koox jihaaddi ah oo ka dhisan Mozambique
Jimco, Juun 19, 2020 (HOL) – Sida lagu qoray barta wararka ammaanka ka faalloota ee The intelligence Briefs ayaa qortay in dowladda Tanzania billowday baaritaanno la xiriira muwaadiniinteeda ku biiri kara kooxda Al-shabaab ee ka dhisan gudaha waddanka Mozambique ee ka dagaallanta Gobolka lagu magacaabo Cabo Delgado, sida lagasoo xigtay Ilo sirdoon.
Kooxda ayaa dhowaan baahisay muuqaal ku baxayay Afka Sawaaxiliga oo loogu hanjabayo dowladda Tanzania iyo muwaadiniiteeda haaysta diinta masiixiyadda , muuqaalkaasi oo lagu sheegay mid Boqobogando ah ayaa waxa uu haddana u muuqanayay mid wata khatartiisa ammaan.
Iyadoo aan la dhayalsan karin Ururka ISCAP iyo dagaallada uu ku jiro.
Muuqaal lagu baahiyay bishii April baraha bulshada ayaa qof jihaaddi ah oo aan muuqan waxa uu si toos ah ugu hanjabay madaxweynaha Tanzania iyo muwaadiniinta qarankaas ee masiixiyiinta ah . Muuqaalka Ayaan sidoo kale la garan karin halka lagasoo duubay , laakiin qofka hanjabayay oo muuqday hoggaamiye ka tirsan kooxdaas.
Xilli hore ayey dowladda Tanzania waxay ciidamo dheeraad ah dhigtay xadka ay la wadaagto waddanka Mozambique si loola socda dhaqdhaqaaqa ammaanka la xiriira, haddii ay xubno kooxdaas ka tirsan ay isku soo dayaan in ay usoo gudbaan Tanzania .
Wararka ay qorayaan dhinacyada ka fallooda sirdoonka iyo ammaanka ayaa sheegaya in xaddi badan oo dhalin-yaro reer Tanzania ah ay ku biiireen Ururkaas ka dagaallama gudaha waddanka Mozambique .
← Toronto Raptors oo hanatay koobka NBA-da
Somalia: SNA and AMISOM Troops Flushes Alshabaab Out of Luqa Jelow →
Sabti, Jan 2 , 2021-Dowladda Britain oo digniin caafimaad soo culus soo saartay
Axad, Oct 11, 2020-Faahfaahino kasoo baxaya dagaal xalay ka dhacay magaalada Jalalaqsi